खाजा कार्यक्रम कटौती हुँदा चेपाङ बालबालिका गयल « Tuwachung.com
२. १७ तस्बिरमा गायिका तथा मोडेल पाठक
३. राजा महेन्द्रकी पहिलो गुरुङसेनी रानी : दरबारबाहिरकी महारानी
५. सम्मानित सुशीला
६. ८४ वर्षमा एसएलसी गर्नेको कथा
७. मेयर हुनुअघिका मेयर
९. मुक्तक प्रतियोगितामा प्रथम हुँदा २०० को रिचार्ज
१०. नियमित यौनसम्पर्कले टाउको दुखाइ कम
११. मोडलिङ पनि कस्तो–कस्तो, नांगिने होडबाजीजस्तो
खाजा कार्यक्रम कटौती हुँदा चेपाङ बालबालिका गयल
हीरालाल गुरुङ	२०७६ चैत्र २८, २०:५२
मुग्लिन (चितवन) । जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकास्थित विद्यालयका विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाँदैन । चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेका बस्तीका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाँदैनन् ।
कक्षा ३ सम्म पठनपाठन सूर्यज्योति राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा ३५ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । तर, २० जनाको हाराहारीमा विद्यालय जान्छन् । अधिकांश चेपाङ बालबालिका अध्ययनरत यस विद्यालयका विद्यार्थीले कापी, कलम नलैजाँदा पठनपाठनमा समस्या हुने विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सकिला जोशीले बताइन् ।
‘चेपाङ बालबालिका नियमित विद्यालय आउँदैनन्,’ प्रधानाध्यापक जोशीले थपिन्, ‘आएकाले पनि कापी, कलम ल्याउँदैनन् । त्यसैले पठनपाठनमा समस्या छ ।’ विद्यालय खाजा कार्यक्रम हटेपछि चेपाङ बालबालिका नियमित विद्यालय आउन छाडेको उनले सुनाइन् ।
प्रधानाध्यापक जोशीका अनुसार भौगोलिक विकटताले यस विद्यालयमा सहयोगी संस्था पुग्न सकेका छैनन् । विद्यालयले पनि विद्यार्थीलाई कापी, कलम दिन सकिने अवस्था छैन । इच्छाकामना गाउँपालिका–२ कै आधारभूत राष्ट्रिय विद्यालय मायाटारमा समेत चेपाङ विद्यार्थी कापी, कलमविना विद्यालय जाने गरेको प्रधानाध्यापक पदमबहादुर चेपाङले बताए । एक सय ७३ विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा ७५ प्रतिशत चेपाङ सुमदायका बालबालिका अध्ययनरत छन् ।
कक्षा एकदेखि आठसम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा ८०/८५ विद्यार्थीमात्र नियमित जाने गर्छन् । वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय चनौटेको समस्या पनि उस्तै छ । कक्षा एकदेखि आठसम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा पनि १२५ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
विद्यालयको नियमित हाजिरीमा भने ७०.७५ जनाको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । विद्यालयमा आउँदा अधिकांश विद्यार्थीले कापी, कलम ल्याउँदैनन् । यहाँ भने घर्ती समुदायका बालबालिका अध्ययनरत छन् । घर्ती समुदायको पनि आर्थिक अवस्था र चेतना स्तर चेपाङ समुदायको जस्तै रहेको विद्यालयका सहयोगी कर्मचारी कृष्णबहादुर घर्ती बताउँछन् ।
आर्थिक अभावका कारण विद्यार्थी नियमित विद्यालय नआउने राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक भावना खनियाँ बताउँछन् । विद्यार्थी विद्यालय आउँदा कापी, कलमसमेत नलिईकन आउने उनले बताइन् । विशेषगरी जाडोमा न्यानो कपडा नहुनु र विद्यालय खाजा कार्यक्रम व्यवस्था नहँुदा बालबालिका नियमित आउन नसकेको प्रधानाध्यापक खनियाँको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपक सिग्देलले विशेषगरी चेपाङ बालबालिकालाई नियमित विद्यालयसम्म ल्याउन कठिनाइ भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । सिग्देलका अनुसार आर्थिक अभावका कारण नै चेपाङ बालबालिका नियमित विद्यालय आउँदैनन् ।
रोकिएको खाजा कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्ने सिग्देलको भनाइ छ । विपन्नता र गरिबीका कारण विशेषगरी चेपाङ समुदायका बालबालिकालाई नियमित विद्यालय ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । उनीहरूको बसोवास रहेका यस गाउँपालिकाका विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम अझै पनि आवश्यक रहेको सिग्देलको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारको जोडबल, घर–आँगनमै कोभिड अस्पताल
दुर्छिम (खोटाङ) । स्वास्थ्यभन्दा ठूलो सम्पत्ति अरू हुनै सक्दैन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमित बीसको
विपनाको बिजोग : शत्रुलाई पनि नलागोस् यस्तो रोग
दैलेख । छाला रोगपीडित विपना कठायतको स्वास्थ्य अवस्था दिनदिनै बिग्रँदै गएको छ । स्वास्थोपचार गर्न
७० फिल्ममा अभिनय गरेकी मौसमी मल्ल होटल व्यवसायमा
७० चलचित्रमा अभिनय लोभलाग्दो अभिनय गरेकी नायिका मौसमी मल्ल एकताका सर्वाधिक रुचाइएकी थिइन् । चलचित्र